Sida loo dar metadata in Lugood Library Si fudud
> Resource > Lugood > Sidee ayaan si fudud oo toos ah ku dari kartaa metadata in Lugood
Metadata u music ka mid ah magac album, artist, magaca track, farshaxanka album iyo xubnihii kale ee la aqoonsado oo ku saabsan file music ah. Haddii aad dooxeen oo heeso badan ka CD-yada si ay u Lugood ama ay ku darsadaan Lugood maktabadda oo heeso badan in ay diiwaangashan yihiin ka video ama maqal ah goobaha, fursadda in aad waxaa laga yaabaa in files badan oo macluumaad ka maqan yahay ama macluumaad aan sax ahayn sida "Track 01" ama "Lama yaqaan Artist".
Tan iyo metadata arrimaha badan ee lagu hayo maktabadda Lugood aad nadiif ah, waxaa lagama maarmaan ah in aad si aad u hesho qalab weyn si uu u xaliyo heesaha oo dhan si fudud. Ha welwelin. Eeg dheeraad ah lahayn in ay halkan ka heli fursad weyn si ay uga caawiyaan-ka Wondershare TidyMyMusic u Mac ( Wondershare TidyMyMusic ). Waxaa si toos ah u aragto dhamaan macluumaadka songs maktabadda Lugood iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad Cudarada macluumaadka si heesaha si ay u la soo bandhigay qalabka la qaadi karo aad. Aan hubi sida loo isticmaalo hoose.
1 Burcad TidyMyMusic si toos ah u soo dhoofsadaan maktabadda Lugood aad
Download iyo rakibi TidyMyMusic aad Mac. Marka aad u furo, waxaa si toos ah iskaan doonaa maktabadda Lugood si aad u dajiyaan oo dhan music si ay saxaarad faylka hoos nidaamsan Lugood. Iyo barnaamij ku samayn doonaan iskaanka ah mar kasta oo aad dib-u-furan.
2 Raadi metadata u heesaha oo dhan in Lugood
Haddii aad rabto in aad ka heli metadata loogu heeso badan, kaliya tagaan oo ay u madax barnaamijka. Sax checkbox ee Search for Songs Allaha oo guji badhanka Scan, markaa barnaamijkan bilaabi doonaan in ay ka heli metadata u heesaha oo dhan maktabadda Lugood aad.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad tirtirto ku tus ka dhibsado maktabadda Lugood aad, kaliya fiiri sanduuq ee Search for songs labalaabka oo guji badhanka Scan. Marka dhan tus ka waxaa laga helaa, waxaad go'aansan kartaa oo ka mid ah si ay u tirtirto keligaa.
3 dar metadata dhammaan music Lugood ah
Dooro mid ka mid ah hees iyo arko in ay macluumaad ka heli khaanadda saxda ah. Markaas riix batoonka Codso hoose si Cudarada metadata in ay files music ah.
Fiiro gaar ah: mar Waad beddeli kartaa metadata ka dib codsanaya. Guji Edit icon ee khaanadda saxda ah ka dibna buuxin duurka tafatir ah waxa ay ku maskaxdaada. Taasi ma noqon karaan kuwo fudud.
Ogsoonow in metadata waxaa gundhig in files music si aad u wareejin karaan oo iyaga muujiyaan on qalabka aad la qaadi karo sida iPod ama iPhone. Ma sugi karaa in ay isku day ah? Just download it si uu u siiyo go a oo aad marna la sii dayn doonaa.